Wararka Maanta: Talaado, Sept 25, 2012-Ciidamada AMISOM oo ka qayb-galay iska-horimaad dhexmaray ciidamada Dowladda Somalia oo ka dhacay duleedka Muqdisho
Guddoomiyaha gobolka Shabeellada hoose ee dowladda Soomaaliya, Cabdulqaadir Maxamed Nuur oo saxaafadda la hadlay ayaa sheegay in ciidamada AMSIOM ay ka qaybgaleen dagaalka ayna gubeen mid ka mid ah gaadiidkii ay ciidamad Soomaalidu wateen.
"Dagaalku wuxuu ka dhacay Lafoole, wuxuuna u dhexeeyay ciidammo uu watay gudoomiye ku xigeenka gobolka Shabeellada hoose iyo askar isbaaro ay halkaas u taallay, waxaana dhintay shan askari oo labada dhinac ah, afar kalena dhaawacyo ayaa soo gaaray," ayuu guddoomiyuhu u sheegay saxaafadda.
Mar guddoomiyaha la weydiiyay sababta keentay inay ciidamada AMISOM dagaalka qayb uga noqdaan ayuu sheegay in loo sheegay warar aan sax ahayn oo sheegaya in gaari dagaal oo Al-shabaab ay leedahay uu jidka soo galay, taasoo keentay inay isticmaalaan hub culus.
"Runtii AMISOM waan gaarsiinnay sida ay wax u dhaceen, waxaana ka sugaynaa in ay baaritaanno ku sameeyaan," ayuu yiri guddoomiyhuh hadalkiisa ku daray, isagoo xusay in dhaawacyadii askartii wax ku noqday dagaalka la dhigay Isbitaalka Madiina ee Muqdisho.
Ma ahan markii ugu horreysay oo ciidammo kawada tirsan dowladda Soomaaliya uu dhexmaro dagaal, balse waxay noqonaysaa markii ugu horreysay oo ciidammada AMISOM ay ka qaybgalaan dagaal u dhexeeya ciidamada Soomaaliya.
Taliska AMISOM ayaan weli ka hadlin dhacadan, iyadoo aysan jirin wax khasaare ah oo dhankooda kasoo gaaray dagaalkii ay markii dambe ku biireen oo shalay ka dhacay deegaanka Lafoole ee duleedka Muqdisho.